IFord Iron Enamel Casserole Factory - Abakhiqizi BaseChina China Iron Enamel Casserole, Suppliers
Imininingwane Yomkhiqizo: JT B29, JT B34: Material: Cast Iron Enamel size: 30 * 23 * 11 tseb33.5 * 25.5 * 13.3 Ukupakisha: ibhokisi 1.Light nge koqweqwe lwawo okuqedile kufanelekile ukupheka nokusebenzela. I-2.Scratch-ukumelana, ibala, I-3.Sure-grip, i-wide-angle wedge iphatha induduzo nokuqina. Isisekelo se-4.Thicker sakha ukwabiwa okuningi kokushisa. I-5.Tiered lid design ifaka amandla ekuxhumeni kwangaphakathi kokudla okumanzi okumnandi.
Imininingwane Yomkhiqizo: JT B29, JT B34: Material: Cast Iron Enamel size: 30 * 23 * 11 ati33.5 * 25.5 * 13.3 Ukupakisha: ibhokisi 1.Ligter enamel okuqedile koqweqwe oluphelele upheka futhi upheka. I-2.Scratch-ukumelana, ibala, I-3.Sure-grip, i-wide-angle wedge iphatha induduzo nokuqina. Isisekelo se-4.Thicker sakha ukwabiwa okuningi kokushisa. I-5.Tiered lid design ifaka amandla ekuxhumeni kwangaphakathi kokudla okumanzi okumnandi.
Imininingwane Yomkhiqizo: JT B29, JTB34: Material: Cast Iron Enamel size: 30 * 23 * 11 tseb33.5 * 25.5 * 13.3 Ukupakisha: ibhokisi 1.Ligter enamel okuqedile koqweqwe oluphelele upheka futhi upheka. I-2.Scratch-ukumelana, ibala, I-3.Sure-grip, i-wide-angle wedge iphatha induduzo nokuqina. Isisekelo se-4.Thicker sakha ukwabiwa okuningi kokushisa. I-5.Tiered lid design ifaka amandla ekuxhumeni kwangaphakathi kokudla okumanzi okumnandi.
Imininingwane Yomkhiqizo: JTA22, JTA 24 Material: Cast Iron Enamel size: 21.5 * 9 ， 24.5 * 12 Ukupakisha: ibhokisi 1.Light nge koqweqwe lwawo oluhle kuqeda uphelele ukupheka nokusizakala. Isikhumba esiphikisayo esimelana nokugqinsiwa, okungahambisani namabala, nokungenzi ubuthi, ngaphakathi kwezangaphakathi koqweqwe olumnyama. I-2.Sure-grip, i-wide-angle wedge iphatha induduzo nokuqina. Isizinda se-3.Thicker sakha ukwabiwa okuningi kokushisa. I-4.Tiered lid design ifaka amandla ekunikezelweni kwangaphakathi kokudla okumanzi okumnandi.
Sakaza u-Iron Casserole
Inombolo yento KA3006 Round Casserole D: 27CM / 30CM Izici zensimbi engenasici kanye nokusingathwa kwe-loop yombala omkhulu wokulawula umbala obomvu, ophuzi, oluhlaza okwesibhakabhaka, opinki, omnyama, o-oating enamel wokubala 1.Heavy-task enamel coating 2.8Ukusabalalisa okushisa okuphezulu nokugcinwa kwe-3 .Cast iron heats slowly and ngokulinganayo 4.Perfect for slowlyl ukupheka Izici: knob insimbi engenasisekelo kanye nezingalo zokubamba zokulawula okukhulu Smooth ingilazi ingaphezulu ngeke isabele izithako Professional grade cast iron ubamba ukushisa kanye dist ...